Vaovao - Sehatra fampiharana ho an'ny fantsona mandeha ho azy
Miaraka amin'ny fivoaran'ny toekarena, miankina betsaka amin'ny filan'ny angovo ny olona. Fitaovana fitaterana angovo ny fitaterana fantsona. Milamina sy ara-toekarena izy io ary noho izany dia be mpampiasa. Ny milina fantsom-bozaka mandeha ho azy dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fantsom-bokatra mandeha ho azy amin'ny indostria isan-karazany toy ny solika, gazy voajanahary, indostria simika, toby famokarana herinaratra, vatan'ny tank, injeniera an-dranomasina, famatsian-drano sy injeniera fanatobiana rano, injeniera termal sns. Anisan'ireo sehatra maro azo ampiharina, ny fantsom-pandefasana solika sy solika be fitakiana indrindra dia tsy isalasalana. Noho izany, ny fitaovana welding mandeha ho azy tsara dia tokony hiorina amin'ny hoe azo ampifanarahana tsara amin'ny filan'ny welding ny solika sy gazy toy ny fenitra amin'ny fandinihan-tena.
Miaraka amin'ny fampiharana sy fampiroboroboana fantsona mandeha ho azy ny fantsom-pitrandrahana solika sy gazy voajanahary, ary miaraka amin'izay koa, ny fananganana fantsona dia manana fepetra avo lenta kokoa ho an'ny tsy fitoviana amin'ny kalitaon'ny welding, dia mihasarotra hatrany ny fampiofanana ireo lasera fampiasa mahazatra. Ny fantsom-bozaka mandeha ho azy dia mampihena ny hamafin'ny asan'ny mpampitroka ary mamboly ny fotoanan'ny welders. Fohy kokoa, ny fizotry ny welding automatique eo an-toerana dia tanterahina tsara, ary tsara kokoa ny fahombiazan'ny seam. Sina dia firenena manana tany somary saro-takarina. Tanàna be mponina marobe no monina ao amin'ny havoana atsimo sy tendrombohitra ary faritra misy ny rano, ary misy bebe kokoa ny fitakiana fitaterana ny fantsona voajanahary. Betsaka, noho izany dia ilaina ny fitaovana fantsom-bozaka mandeha ho azy mety amin'ny tany sarotra.
Ny fampifangaroana ny toetra mampiavaka ny faritra be tendrombohitra midina, ny faritra misy ny rano ary ny tontolon'ny gara misy toerana voafetra, Tianjin Yixin dia mampifangaro ny milina fantsom-bozaka mandeha ho azy, ary manavao habe kely, asa matanjaka kokoa ary kalitao azo antoka kokoa. . Ny vahaolana amin'ny fizotry ny fitaovana dia mifanaraka amin'ny filan'ny asa fantsom-pahefana mandeha ho azy amin'ny tontolon'ny asa fanorenana.
Vao tsy ela akory izay dia nandinika ny tatitra fanadihadiana momba ny lozam-pifamoivoizana nipoaka tany amin'ny faritra Shazi Town ao amin'ny Qinglong County, County Qinglong, Prefektioran'i Qianxinan an'ny fantsona gazy voajanahary China-Myanmar tamin'ny 10 Jona 2018. Niteraka fahafatesan'olona 1 ary 23 naratra ny loza. ary fatiantoka ara-toekarena mitentina 21,45 tapitrisa yuan.
Ny fahatapahan-tanana dia nahatonga ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny lasitra girth, izay nahatonga ny gazy voajanahary marobe tao anaty fantsom-pivoahana ary nifangaro tamin'ny rivotra mba hamorona fangaro mipoaka. Ny fifandonana mafy eo anelanelan'ny habetsahan'ny gazy voajanahary sy ny vaky fantsona dia nahatonga ny herinaratra nijanona nampirehitra sy nipoaka. Ny tena antony nahatonga ny lozam-pifamoivoizana dia ny tsy fitan'ny kalitaon'ny famafana eo an-toerana ny fepetra takiana amin'ny fenitra mifandraika amin'izany, izay nahatonga ny fahatapahan'ny mora vaky ny valinteny teo ambanin'ny asan'ny enta-mavesatra mitambatra. Ireo anton-javatra izay miteraka olana amin'ny kalitaon'ny lasitra girth dia misy ny fomba fanao fikajiana ny fantsona vy X80 eo an-toerana, ny fepetra takiana ambany amin'ny fenitra fitsapana tsy manimba eo an-toerana, ary ny fitantanana kalitaon'ny fanorenana lax. Ny fehin-kibo semi-mandeha ho azy + welding fampiasa amin'ny tanana dia ampiasaina amin'ny famafana fantsona voajanahary voajanahary amin'ny tsipika China-Myanmar. Ireo mpandrendrika tsirairay ampiasain'ny mpitrandraka lasitra lozam-pifamoivoizana dia nanamboatra mari-pankasitrahana ho an'ny mpandraharaha welding manokana. Manaitra ny antony sy ny vokatr'ilay loza.
Ny fantsom-bozaka mandeha ho azy amin'ny ankapobeny dia matetika no mampiasa ny fivezivezena amin'ny fivezivezena lehibe, ny famenoana sy ny fandrakofana dia vita ho azy, izay miantoka ny tsy fitovizan'ny hatsaran-tariby raha ampitahaina amin'ny boky torolàlana, amin'ny fiantohana ny kalitaon'ny lasitra, ary ny fanomezana antoka voalohany indrindra ho an'ny fiarovana maharitra. fiasan'ny fantsona.